မှတ်ချက် YBOP: အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသဘောတရားသည်အချို့သောကုသသူများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာပညာရှင်များအတွက်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကိုမူးယစ်ဆေးစွဲမှုကိုထင်ဟပ်စေကြောင်းသုတေသီများကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာသည်။ မူးယစ်ဆေးလုပ်နိုင်သမျှသည်ပုံမှန်ဇီဝကမ္မဗေဒယန္တရားကိုချဲ့ထွင်ရန်သို့မဟုတ်တားဆီးရန်ဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းယန္တရားများသည် ဦး နှောက်တွင်ရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းယန္တရားများကို supranormal stimulation ပါ ၀ င်သည့်အပြုအမူများသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေသည့်စွမ်းရည်ရှိသည်ဆိုသည်မှာကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်။
နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2011 စက်တင်ဘာ 1 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
Am J မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု။ ၂၀၁၀ စက်တင်ဘာ၊ 2010 (36): 5-233 ။
Jon အီး Grant က,1 မာ့ခ် N. Potenza,2 Aviv Weinstein,3 နှင့် David A. Gorelick4
အပြုအမူများစွာသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ ၀ တ္ထုကိုစားသုံးခြင်းအပြင်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များကိုသိသော်လည်း၊ အပြုအမူအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းရှိသော်ငြားအမြဲတမ်းအပြုအမူများကိုဖြစ်ပေါ်စေမည့်ရေတိုအကျိုးကျေးဇူးရရှိသည်။ ဤရွေ့ကားမမှန်သမိုင်းကြောင်းအတော်ကြာနည်းလမ်းများအတွက် conceptualized ပါပြီ။ အမြင်တစ်ခုကဤရောဂါများကိုထကြွလွယ်သော compulsive ရောင်စဉ်တလျှောက်လဲလျောင်းနေပြီးအချို့ကို Impulse Control Disorders ဟုသတ်မှတ်သည်။ တစ် ဦး ကအခြား, ဒါပေမယ့်အပြန်အလှန်သီးသန့်မဟုတ်, အယူအဆစိတ်ရောဂါ Non- ပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ် "အပြုအမူ" စွဲအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ရည်ရွယ်ချက်များစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုအကြားဆက်နွယ်မှုအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းကိုအကြောင်းကြားပါ။ နည်းလမ်းများ: ကျနော်တို့ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုရောဂါများသို့မဟုတ်အမူအကျင့်စွဲနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲအကြားတူညီခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုသရုပ်ဖော်ဒေတာပြန်လည်သုံးသပ်။ ဤအကြောင်းအရာသည်လာမည့်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း၏စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (DSMV) တွင်ဤရောဂါများကိုအကောင်းဆုံးခွဲခြားရန်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်သည်။ ရလဒ်များ - ကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားများအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုအဆိုပါ DSM-V ကို Task Force supporting ကသဘာဝသမိုင်း, phenomenology, သည်းခံစိတ်, comorbidity, ထပ်မျိုးရိုးဗီဇအလှူငွေ, neurobiological ယန္တရားများနှင့်ကုသမှုကိုတုံ့ပြန်အပါအဝင်အများအပြား domains များအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်း, စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ရောဂါများသစ်အမျိုးအစားအဆိုပြုထားဆင်တူကြောင်းအကြံပြု ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ခြင်းနှင့် Non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးလွှမ်းခြုံ။ လက်ရှိဒေတာဒီပေါင်းစပ်အမျိုးအစားရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အနည်းငယ်ကတခြားပိုကောင်းတဲ့လေ့လာခဲ့အပြုအမူဥပမာစှဲ, အင်တာနက်စွဲများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အခြားအအဆိုပြုထားသောအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုမဆိုခွဲခြားအပြစ်လွတ်စေမလုံလောက်သောဒေတာလက်ရှိတွင်ရှိပါသည်။ သုံးသပ်ချက်နှင့်သိပ္ပံသိသိသာသာ: သင့်လျော်အပြုအမူစှဲ၏အမျိုးအစားသို့မဟုတ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်တိုးတက်လာသောကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုမဟာဗျူဟာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ဒေါက်တာဒေးဗစ်အေ Gorelick, 251 Bayview Boulevard, Baltimore, MD 21224, အမေရိကန်နိုင်ငံမှစာပေးစာယူနေရပ်လိပ်စာ။ E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] keywords အမူအကျင့်စွဲ, ခွဲခြား, ရောဂါ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါ, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ
အပြုအမူများစွာသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ ၀ တ္ထုကိုစားသုံးခြင်းအပြင်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များကိုသိသော်လည်း၊ အမူအကျင့်အပေါ်ထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းရှိသော်ငြားအမြဲတမ်းအပြုအမူများကိုဖြစ်ပေါ်စေမည့်ရေတိုအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေသည်။ ထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှု၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ဤတူညီမှုသည်ပစ္စည်းမဟုတ်သော (သို့) အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုဟူသောအယူအဆကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆင်တူသည့်ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသဘောတရားသည်သိပ္ပံဆိုင်ရာနှင့်လက်တွေ့ heuristic တန်ဖိုးအချို့ရှိသော်လည်းအငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်နေသည်။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာပြcurrentlyနာများသည်ပဉ္စမထုတ်ဝေခြင်း (DSM-V) ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေတွင်ဆွေးနွေးငြင်းခုံလျက်ရှိသည် (၁၊ ၂)
အများအပြားကမူအကျင့်စှဲပစ္စည်းဥစ္စာစှဲဖို့တူညီရှိခြင်းအဖြစ်တွေးဆခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိ Diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ, စတုတ္ထ Edition ကို (DSM-IV-TR) ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ထံမှသီးခြားကဏ္ဍအဖြစ်သူတို့ကိုခွဲခြားဤရောဂါ၏အတော်ကြာများအတွက် (ဥပမာ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, kleptomania) တရားဝင်အဖြေရှာတဲ့စံသတ်မှတ်ထားသောသိရသည်။ အခွားသောအမူအကျင့် (သို့မဟုတ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်) ကိုလာမည့် DSM-compulsive ဝယ်, ရောဂါဗေဒအသားအရေ Pick, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ (Non-paraphilic hypersexuality), အလွန်အကျွံ tanning, ကွန်ပျူတာ / ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားများနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းထဲမှာပါဝင်ဘို့စဉ်းစားပါပြီ။ ဘယ်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနေတုန်းပဲဆွေးနွေးငြင်းခုံ (3) အတွက်ပွင့်လင်းဖြစ်သကဲ့သို့ထည့်သွင်းရန် behaviors ။ Impulse ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအားလုံးကတော့ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်, ဒါမှမဟုတ်ပုံမမှန်, အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ အဆိုပါချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်အများအပြားဖြစ်သော်လည်း (ဥပမာ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, kleptomania) မပြုစေခြင်းငှါ, ထိုကဲ့သို့သောပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲရောဂါအဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်း, အခြားသူများနှင့်အတူအမာခံ features တွေဝေမျှဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲမှပံ့ပိုး၏မြော်လင့်ခြင်းများတွင်ဤဆောင်းပါးကို, အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားတူညီဘို့အထောက်အထားသုံးသပ်ပြီး obsessive compulsive ရောဂါမှမိမိတို့ဂုဏ်ထူးနှင့်အနာဂတ်သုတေသန warranting မသေချာမရေရာဒေသများတွင်သတ်မှတ်။ ဒါဟာအစအသေးစိတ်အချို့သည် putative စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်သောဤပြဿနာအတွက်ဆက်ခံဆောင်းပါးများ, တစ်ခုမိတ်ဆက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
အပြုအမူစွဲ Commons အင်္ဂါရပ်များ: ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု disorders ဆက်ဆံရေး
အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏မရှိမဖြစ်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ခုခံတွန်းလှန်မောင်းထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သွေးဆောင်မှုလူတစ်ဦးမှသို့မဟုတ်အခြားသူများ (4) အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းတစ်ခုလုပ်ရပ်လုပ်ဆောင်ဖို့ပျက်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမူအကျင့်စွဲနေတဲ့သီးခြားဒိုမိန်းအတွင်းဒီမရှိမဖြစ်အင်္ဂါရပ်ရှိကြောင်းအပြုအမူတစ်ခုမှုများထပ်တလဲလဲပုံစံဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအအပြုအမူတွေအတွက်ထပ်တလဲလဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနောက်ဆုံးမှာတစ်ခြား domains အတွက် functioning နှောင့်ယှက်။ ဤအမှု၌, အမူအကျင့်စွဲလမ်းသောဥစ်စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်နှင့်ဆင်တူနေသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမသောက်သို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့အတွက်တိုက်တွန်းတွန်းလှန်ရာမှာအခက်အခဲသတင်းပို့ပါ။
အပြုအမူနှင့်စွဲလမ်းမှုသည်သဘာဝသမိုင်း၊ ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆိုးကျိုးများအတွက်တူညီမှုများစွာရှိသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်လူကြီးများနှင့်ငယ်ရွယ်သောအရွယ်များနှင့်ဤသက်ကြီးရွယ်အိုများအရွယ်များထက်ပိုမိုမြင့်မားသောနှုန်းထားများရှိကြသည် (၅) ။ နှစ် ဦး စလုံးတွင်သဘာ ၀ သမိုင်းကြောင်းရှိသည်၊ နာတာရှည်ပြန်ဖြစ်လာသည့်ပုံစံများရှိသော်လည်းလူအများအပြားသည်ပုံမှန်ကုသမှုမခံရဘဲမိမိတို့ဘာသာပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ခြင်း (“ အလိုအလျောက်” နှုတ်ထွက်ခြင်း) (5) နှင့်အတူ။
အပြုအမူစွဲလမ်းမှုသည်“ လုပ်ရပ်မကျူးလွန်မီတင်းမာမှုသို့မဟုတ်နှိုးဆွမှု” နှင့်“ လုပ်ရပ်ကျူးလွန်ချိန်၌ပျော်မွေ့ခြင်း၊ ဤအပြုအမူများ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိသဘောသဘာဝသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်အတ္တ -dystonic သဘာဝနှင့်စွဲလမ်းမှု - compulsive disorder နှင့်မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ အမူအကျင့်နှင့်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုနှစ်ခုစလုံးသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ego-syntonic နှင့်ပိုမို ego-dystonic ဖြစ်လာနိုင်သည်။ အလေ့အကျင့်သို့မဟုတ်အတင်းအကျပ် (4, 2), ဒါမှမဟုတ်အပြုသဘောအားဖြည့်ခြင်းနှင့်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ခြင်း (ဥပမာ, dysphoria သို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာ၏ကယ်ဆယ်ရေး) အားဖြင့်ပိုပြီးလှုံ့ဆျောဖြစ်လာသည်။
အမူအကျင့်နှင့်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုသည်ထူးခြားသောတူညီမှုများရှိသည်။ အမူအကျင့်စွဲလမ်းနေသူများစွာသည်အမူအကျင့်ကိုမစတင်မှီတွန်းအားသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုအခြေအနေကိုဖော်ပြကြသည်။ ထို့အပြင်ဤအပြုအမူများသည်မကြာခဏစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီးအပြုသဘောဆောင်သောစိတ်အခြေအနေသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမူးယစ်စေသည့်“ မြင့်မားခြင်း” ကိုဖြစ်စေသည်။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်အမူအကျင့်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ခြင်းများကိုစွဲလမ်းစေသည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း၊ kleptomania၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် ၀ ယ်ယူမှုများရှိသူများသည်ဤအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်သက်ရောက်မှုများထပ်ခါတလဲလဲပြုမူခြင်းနှင့်အတူစိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်တူသောစိတ်ဓါတ်သက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်အပြုအမူ၏ပြင်းထန်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း (8-9) ။ ဤအပြုအမူစွဲလမ်းမှုနှင့်အတူများစွာသောသူတို့သည်အပြုအမူများမှရှောင်ကြဉ်စဉ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြပြီးဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်တူသည်။ သို့သော်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်မတူဘဲအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများမှဇီဝကမ္မဆိုင်ရာထင်ရှားသောသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလေးအနက်ထားသောဆုတ်ခွာမှုသတင်းများမရှိပါ။
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, အများဆုံးနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အဆိုပါအမူအကျင့်စွဲလမ်း၏, လေ့လာ, အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် (စ Wareham နှင့် Potenza, ဒီပြဿနာကိုကြည့်ပါ) ၏ဆက်ဆံရေးသို့ထပ်မံထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများသောအားဖြင့်ယောက်ျားပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များ၏ပုံစံ mirroring တစ်ခုအစောပိုင်းကအသက် (5, 12) မှာဖွင့်ဖို့ထိန်းအတူငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းမြင့်မားမှုနှုန်းအမျိုးသမီးအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့တယ်လီစကုပ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည် (13) (ဆိုလိုသည်မှာ, အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာစွဲလမ်းအပြုအမူအတွက်နောက်ပိုင်းမှာကနဦးထိတွေ့ဆက်ဆံမှု, ဒါပေမယ့်စွဲလမ်းဖို့ကနဦးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကနေ foreshortened အချိန်ကာလရှိသည်) ။ အဆိုပါတယ်လီစကုပ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းကျယ်ကျယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် (14) အမျိုးမျိုးတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်၌ရှိသကဲ့သို့, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာများကိုအမူအကျင့်စွဲလမ်းအတွက်ဘုံဖြစ်ကြသည်။ အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ, ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အတူသူကဲ့သို့, မကြာခဏသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းအပြုအမူရန်ပုံငွေသို့မဟုတ်အပြုအမူ၏အကျိုးဆက်များ (15) နဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှဖြစ်စေ, ထိုကဲ့သို့သောခိုးမှု, လှဲသုံးစားနှင့်မကောင်းတဲ့စစ်ဆေးမှုများရေးသားခြင်းအဖြစ်တရားမဝင်လုပ်ရပ်များ, ကျူးလွန်ပါလိမ့်မယ်။
အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်း (16-20) ၏ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် Impulse နှင့်အာရုံခံစားမှု-ရှာခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အနိမ့်၏ Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံအပေါ်မြင့်မားသောဂိုးသွင်းနှစ်ဦးစလုံးဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူသူတို့နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအင်တာနက်စွဲလမ်းသို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအဖြစ်အချို့သောအမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်း (စ Weinstein နဲ့ Lejoyeux, ဒီပြဿနာကိုကြည့်ပါ) အန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်း (21) ၏မြင့်မားသတင်းပို့လိမ့်မည်။ အခွားသောသုတေသန (Weinstein နဲ့ Lejoyeux, ဒီပြဿနာကိုကြည့်ပါ) psychoticism, လူ့ပဋိပက္ခနှင့် Self-ညွှန်ကြား၏ရှုထောင့်အားလုံးအင်တာနက်စွဲလမ်းတစ်ကဏ္ဍမှပါစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ဆနျ့ကငျြ, obsessive compulsive ရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုယေဘုယျအား Impulse အပေါ်ထိခိုက်မှုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်အနိမ့်များ၏အစီအမံ (17, 21) ရက်နေ့တွင်အမြင့်ဆုံးဂိုးသွင်း။ အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်း compulsive ၏အစီအမံအပေါ်မြင့်မားသောဂိုးသွင်းပေမယ့်ဒီမော်တာအပြုအမူတွေ (22) ကျော်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးအကြောင်းကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ကျော်ချို့ယွင်းထိန်းချုပ်မှုမှကန့်သတ်နိုင်ပါသည်။ (compulsive အထောက်အကူပြုဖို့ထင်) သိမြင်လွယ်ပြင်လွယ်မရှိတဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးဖို့ကန့်သတ်ခဲ့သော်လည်းမော်တာတုံ့ပြန်မှု (Impulse) ၏ချို့ယွင်းတားစီး, obsessive compulsive ရောဂါနှင့်ရောဂါဗေဒအသားအရေကောက်နေ (compulsive ရောဂါ obsessive မှပွဲတစ်ပွဲပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်စဉ်လင့်များနှင့်အတူတစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲ) နဲ့တဦးချင်းစီမှာတွေ့ရှိထားသည် compulsive ရောဂါ (23, 24) ။
TABLE 1 ။ အမူအကျင့်စွဲလမ်းအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်၏တစ်သက်တာခန့်မှန်းချက်။
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း 35% -63%
ရောဂါဗေဒအသားအရေ 38% ကောက်နေ
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 64%
(21): compulsive 46% -102% ရင်းမြစ်ဝယ်ယူ။
အများဆုံးတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်လေ့လာမှုများအမူအကျင့်စွဲလမ်း၏အကဲဖြတ်မပါဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းလက်ရှိ့ epidemiological data တစ်ခုချင်းစီကိုဦးတည် Co-ဖြစ်ပျက်မှုနှုန်းမြင့်မားမှုနှုန်း (25, 26) နဲ့, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားဆက်ဆံရေးကိုထောကျပံ့။ အဆိုပါစိန့်လူးဝစ် epidemiological ရေဝေရေလဲဧရိယာ (ECA) လေ့လာမှုယေဘုယျအားဖြင့်လောင်းကစားဝိုင်း, အရက်သုံးစွဲခြင်းမမှန်ခြင်း, antisocial ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ (အကြားလေ့လာတွေ့ရှိမြင့်ဆုံးလေးသာမှုအချိုးနှင့်အတူ, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း (နီကိုတင်းမှီခိုအပါအဝင်) မမှန်ခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် Co-ဖြစ်ပျက်မှုနှုန်းမြင့်မားမှုနှုန်းကိုတွေ့ 25) ။ တစ်ဦးကကနေဒါ epidemiological စစ်တမ်း disorders လောင်းကစားဝိုင်း (3.8) ပစ္စုပ္ပန်အခါတစ်ဦးအရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါများအတွက်ဆွေမျိုးအန္တရာယ် 27-ခြံတိုးပွားလာကြောင်းခန့်မှန်းပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအနက်အမြင့်ဆုံးပြင်းထန်မှုလောင်းကစားဝိုင်းမှအလယ်အလတ်များ၏အန္တရာယ် 2.9 ဆမြင့် (28) ဖြစ်ခဲ့သည်။ 3.3 ထံမှ 23.1 အထိ & Odds အချိုးအမေရိကန်လူဦးရေ-based လေ့လာမှုများ (25, 29) တွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းမမှန်မှုများအကြားသတင်းပေးပို့ခဲ့ကြသည်။ အင်တာနက်စွဲကျား, မ, အသက်နှင့်စိတ်ကျရောဂါ (1.84) အတွက်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်, 2,453 ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ဦးလေ့လာမှုအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်း (30 ၏လေးသာမှုအချိုးအစား) နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်း၏လက်တွေ့နမူနာပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နဲ့ Co-ဖြစ်ပျက်မှု (စားပွဲတင် 1) ဘုံဖြစ်ပါသည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အမူအကျင့်စွဲလမ်းသောဥစ်စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်အတူဘုံ pathophysiology ဝေမျှစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
မည်သည့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အသင်းအဖွဲ့များတစ်ဦးအမူအကျင့်အဆင့်ကို (ဥပမာ, အရက်အသုံးပြုမှုကိုစွဲလမ်းအဖြစ်ဖော်ထုတ်သူများအပါအဝင်မသင့်လျော်အပြုအမူတွေ၏အကွာအဝေး disinhibits) ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦး Syndrome အဆင့်ကို (ဥပမာ, တစ်ဦးအပေါ်ကိုထင်ရှားစွာပြခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်သို့သော်လည်းပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း comorbidity အကြောင်းကိုဒေတာကိုသတိထားပြီးအနက်ရမည်ဖြစ်သည် အမူအကျင့်စွဲဖြစ်နိုင်သည်) အရက်သောက်များအတွက်အစားထိုးအဖြစ်, အရက်ကုသမှုအပြီးတွင်စတင်သည်။ မကြာခဏအရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူပြဿနာကိုလောင်းကစားသမားတွေ သာ. ကြီးမြတ်လောင်းကစားဝိုင်းပြင်းထန်မှုနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းသမိုင်းနဲ့မပါဘဲများထက်လောင်းကစားဝိုင်းကနေရရှိလာတဲ့ပိုပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (31) ရှိသည်, နှင့်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသောက်ရန် aremoderate သူကိုမြီးကောင်ပေါက်မကြာခဏ (32) မဟုတ်သောသူတို့၏ထက်အလောင်းအစားဖို့ပိုများပါတယ်, အရက်နှင့်လောင်းကစားအကြားတစ်ဦးအမူအကျင့်အပြန်အလှန်အကြံပြု။ လက်ရှိသို့မဟုတ်ကြိုတင်ဆေးလိပ်သောက်နေသောရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူ (33) အလောင်းအစားမှသိသိသာသာအားကောင်းရမ္မက်ခဲ့သည့်အချက်ကိုမအဖြစ်မတူဘဲ, နီကိုတင်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အလားတူတွေ့ရှိချက်တစ်ခု syndrome အပြန်အလှန်အကြံပြုထားသည်။ ဆေးရွက်ကြီးနေ့စဉ်အသုံးပြုကြသောပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပြဿနာများ (34) ရှိသည်ဖို့ကပိုများပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောအဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ, စိတ်ကြွရောဂါ, စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး compulsive ရောဂါနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါကဲ့သို့သောအခြားစိတ်ရောဂါမမှန်, အစအများအား (alsoWeinstein နှင့် Lejoyeux, ဒီပြဿနာကိုကြည့်ပါ) အမူအကျင့်စွဲလမ်း (35, 36) နဲ့အသင်းအဖွဲ့အစီရင်ခံရသည်။ သို့သော်ဤ comorbidity လေ့လာမှုအများအပြားလက်တွေ့နမူနာအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်။ ဤအတွေ့ရှိချက်အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာဖို့ယဘေုယသောအတိုင်းအတာဆုံးဖြတ်သည်ခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ဘုံသိမြင်မှုအင်္ဂါရပ်တွေရှိနိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုပုံမှန်အားဖြင့်လျှင်မြန်စွာ (37) ဆုလာဘ်လျော့ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကို, (38) အောင်အန္တရာယ်-ဆုလာဘ်ဆုံးဖြတ်ချက်အကဲဖြတ်ထားပါသည်တဲ့ပါရာဒိုင်းအဖြစ်တာဝန်များကို (39) အောင်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်အားနည်းချက်များကိုလုပ်ဆောင်။ ဆနျ့ကငျြ, အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏လေ့လာမှုအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကို (40) အပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းမရှိထိုကဲ့သို့သောလိုငွေပြမှုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ 49 ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ, 48 abstinent အရက်-မှီခိုဘာသာရပ်များနှင့် 49 ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ပြည့်စုံ neurocognitive ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးကလေ့လာမှုလောင်းကစားသမားတွေနှင့်အရက်သမားနှစ်ဦးစလုံးတားစီး၏စမ်းသပ်မှုအပေါ်လျော့နည်းသွားစွမ်းဆောင်ရည်, သိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းများကိုပြသကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပေမယ်၏စမ်းသပ်မှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုခဲ့ functioning အလုပ်အမှုဆောင် (41) ။
စာပေ၏တစ်ဦးကကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် (42) ၏ pathophysiology အတွက်မျိုးစုံ neurotransmitter စနစ်များ (ဥပမာ serotonergic, dopaminergic, noradrenergic, opioidergic) implicates ။ အထူးသဖြင့်, သင်ယူမှု, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ်အပါအဝင်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ salience နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်အပြုအမူ၏တားစီးနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်သော serotonin (5-HT), နှင့် dopamine, မမှန် (42, 43) ၏နှစ်ဦးစလုံးအစုံမှသိသိသာသာအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။
serotonergic အမူအကျင့်စွဲလမ်းထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အဘို့သက်သေအထောက်အထား platelet monoamine oxidase B က (Mao-B) မှ cerebrospinal fluid နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ပေးသောလှုပ်ရှားမှု, (CSF) ၏လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်လာ 5-hydroxyindole acetic acid ကို (5-HIAA တစ် metabolite ၏အဆင့်ဆင့် 5-HT ၏) နှင့် 5-HT function ကိုတစ်ရံအမှတ်အသားစဉ်းစားသည်။ အနိမျ့ CSF 5-HIAA အဆင့်ဆင့် Impulse နှင့်အာရုံခံစားမှု-ရှာ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းနှင့်အတူပတျသကျနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် (44) တွင်တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်။ serotonergic မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှုကိုတိုင်းတာကြောင်း Pharmacologic စိန်ခေါ်မှုလေ့လာမှုများကိုလည်းအမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် (45) နှစ်ဦးစလုံးအတွက် serotonergic ကမောက်ကမဖြစ်မှုတို့အတွက်သက်သေသာဓကသည်။
တစ်ဦးတတ်ပြီးအောက်ပါတစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲထဲမှာတ္ထုများသို့မဟုတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများ၏ထပ်တလဲလဲသုံးစွဲခြင်းတစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းဖြစ်စဉ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ Preclinical နှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများတတ်ပြီးမောင်းနှင်မမှန်တစ်ခုနောက်ခံဇီဝယန္တရားဟာ ventral tegmental ဧရိယာ / နျူကလိယ accumbens / Orbital တိုကျရိုကျ cortex ဆားကစ် (46, 47) ကဝင်လာသောဆုလာဘ် input ကို၏အပြောင်းအလဲနဲ့ပါဝင်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် Orbital တိုကျရိုကျ cortex မှ dopamine လွှတ်ပေးရန်ကြောင်းအာရုံခံပါရှိသည်။ dopaminergic လမ်းကြောင်းအတွက် ALTER dopamine များလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်း (48) ၏ခံစားချက်များကိုထုတ်လုပ်ကြောင်းဆုလာဘ် (လောင်းကစား, မူးယစ်ဆေးဝါး) ၏ရှာအခြေခံအဖြစ်အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။
neuroimaging လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ကန့်သတ်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခု shared အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏ neurocircuitry နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် (7) ကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ventral medial prefrontal cortex (vmPFC) ၏လျော့နည်းသွားလှုပ်ရှားမှုရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ (49) တွင်လောင်းကစားဝိုင်းတွေကိုတုံ့ပြန်လျော့နည်းသွားအန္တရာယ်-ဆုလာဘ်အကဲဖြတ်အတွက်ထကြွလွယ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်အတူဆက်နွယ်လျက်ရှိသည်။ အလားတူပဲမူမမှန် vmPFC လုပ်ငန်းဆောင်တာပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် (50) နှင့်အတူလူမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကဂိမ်းစွဲထဲမှာဂိမ်း cue-ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ကို Activation မူးယစ်ဆေးစွဲ (51) တွင်မူးယစ် cue-ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်အတူကဲ့သို့တူညီသောဦးနှောက်ဒေသများ (orbitofrontal, dorsolateral prefrontal, anterior cingulate, နျူကလိယ accumbens) တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် (စ Weinstein နဲ့ Lejoyeux, ဒီကြည့်ရှု ထုတ်ပြန်သည်)။
ဦး နှောက်ပုံရိပ်သုတေသနကအကြံပြုသည် ventral tegmental fromရိယာမှနျူကလိယ accumbens အထိ dopaminergic mesolimbic လမ်းကြောင်းသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းမမှန်ခြင်းနှင့်လောင်းကစားလောင်းခြင်းများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ လောင်းကစားလောင်းကစားကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဘာသာရပ်များသည် fMRI နှင့်အတူ ventral striatal အာရုံခံလုပ်ဆောင်မှုကိုပြသသည်။ ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုထုတ်ယူသောအခါအရက်မှီခိုနေသောဘာသာရပ်များရှိလေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဆင်တူသည်။ လျော့နည်းသွား ventral striatal activation ကိုလည်းပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲ (52) နှင့်ဆက်စပ်တပ်မက်ခြင်း၌ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ လောင်းကစားလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်မှုသည်ပါကင်ဆန်ရောဂါ (PD) နှင့်တစ် ဦး ချင်းရှိ ventral striatum နှင့် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုအတွက် PD တစ် ဦး တည်းရှိသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများ၏မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်ဆင်တူသည့်တုန့်ပြန်မှု (၅၄) ကိုထုတ်ဖော်ပြသနေသည်။ (၅၅) ။
အမူအကျင့်စွဲလမ်းအတွက် Dopamine ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုလည်းဆေး PD လူနာ (56, 57) ၏လေ့လာမှုများအားဖြင့်အကြံပြုသည်။ PD နှင့်အတူလူနာနှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများ 6% dopamine agonist ဆေး (58, 59) ယူပြီးသူတွေထဲမှာသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့နှုန်းထားတွေနဲ့အသစ်တစ်ခုစတင်ခြင်းအမူအကျင့်စွဲသို့မဟုတ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါ (ဥပမာ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ) ကိုကြုံခဲ့ရထက်ပိုမိုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ တစ်ဦးကပိုမိုမြင့်မား levo-dopa ထိုးညီမျှနေတဲ့အမူအကျင့်စွဲ (59) ရှိခြင်းပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ dopamine ပါဝင်ပတ်သက်မှုကနေမျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါအဘယျသို့ဆန့်ကျင်, dopamine D2 / D3 receptors မှာရန်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (60) နဲ့ Non-PD တစ်ဦးချင်းစီအတွက်လောင်းကစားဝိုင်း-related တွန်းအားနှင့်အပြုအမူမြှင့်တင်ရန်နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (61, 62) ၏ကုသမှုမထိရောက်မှုရှိ ။ နောက်ထပ်သုတေသနရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းအတွက် dopamine ၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍရှင်းလင်းဖို့မျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အမူအကျင့်စွဲ၏အတော်လေးအနည်းငယ်မိသားစုသမိုင်း / မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများသင့်လျော်သောထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများ (7) နဲ့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ probands ၏ပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးများသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အရက်၏တစ်သက်တာနှုန်းထားများနှင့်အခြားပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ခဲ့ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါများတွေ့ရှိခဲ့ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (63), kleptomania (64), သို့မဟုတ် compulsive ဝယ် (65) တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူ probands ၏အသေးစားမိသားစုလေ့လာမှုများနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များလုပ်ခဲ့တယ်ထက်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန်။ ဤရွေ့ကားထိန်းချုပ်ထားမိသားစုလေ့လာမှုများအမူအကျင့်စွဲလမ်းသောဥစ်စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ရန်မျိုးဗီဇဆက်ဆံရေးမျိုးရှိစေခြင်းငှါမြင်ကွင်းကိုထောက်ခံပါတယ်။
အဆိုပါသတ်သတ်မှတ်မှတ်အပြုအမူများနှင့်မမှန်မှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများကိုနှိုင်းယှဉ်မျိုးဗီဇတူညီ (monozygotic) တွင်၎င်းတို့၏မာတိကာနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ခန့်မှန်းနိုင်ပြီးခွာ (dizygotic) အမွှာအားလုံးအတွက်။ ဗီယက်နမ်ခေတ်အမွှာ Registry ကို အသုံးပြု. အထီးအမွှာ၏လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက်အန္တရာယ်အတွက် nonshared သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပြောင်းအလဲ၏% 12 ရန်မျိုးဗီဇရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက်အန္တရာယ်အတွက်အပြောင်းအလဲနှင့် 20% ၏%3မှ 8% အရက်များအတွက်အန္တရာယ်ကတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ် ပုံမမှန် (66) ကိုအသုံးပြုပါ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းမမှန်မှုများအကြားပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုများ၏သုံးပုံနှစ်ပုံ (64%) နှစ်ဦးစလုံးအခွအေန၏ဗီဇမှတဆင့်ကူးစက်သောကျောထောက်နောက်ခံအတွက်ထပ်တူအကြံပြုခြင်း, နှစ်ဦးစလုံးရောဂါသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းဗီဇမှအကျိုးဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် (67) ၏အကွာအဝေးမှဘုံမျိုးရိုးဗီဇပံ့ပိုးမှုများကိုအကြံပြုခြင်းသူတို့အားဆင်တူသည်။
အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏အလွန်နည်းပါးမော်လီကျူးဗီဇလေ့လာမှုများရှိပါသည်။ အဆိုပါ D2 dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇ (DRD1) ၏ D2A2 allele ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် Co-ဖြစ်ပေါ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် (68) ကို Non-ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်အကြိမ်ရေအတွက်တိုးပွားစေပါသည်။ အများအပြားက DRD2 မျိုးရိုးဗီဇတစ်ခုတည်းဘေ့ polymorphic (SNPs) ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (69) တွင်အမူအကျင့်တားစီး၏ Impulse နှင့်စမ်းသပ်တိုင်းတာ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအစီအမံတွေနဲ့ဆက်နွယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဒီအမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အတူလူအတွက်အကဲဖြတ်ကြပြီမဟုတ်။ အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုသူ (alsoWeinstein နှင့် Lejoyeux, ဒီပြဿနာကိုကြည့်ပါ) ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထက် serotonin Transporter ဗီဇ (5HTTLPR) ၏ရှည်လျားသော-လက်မောင်း allele (SS) ၏မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်, ဤ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်း (70) နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်မကြာခဏစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် pharmacological နှစ်ဦးစလုံး, တူညီတဲ့ကုသမှုမှအပြုသဘောတုံ့ပြန်ကြသည်။ အဆိုပါ 12-Step Self-အကူအညီနဲ့ချဉ်းကပ်မှု, စိတ်ခွန်အားနိုးတိုးမြှင့်နှင့်လေ့ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ကုသရန်အသုံးပြုသိမြင်မှုအမူအကျင့်ကုထုံးကိုအောင်မြင်စွာရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, kleptomania, ရောဂါဗေဒအသားအရေ Pick နှင့် compulsive ဝယ် (71-74) ဆက်ဆံဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြ ။ အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှစ်ခုလုံးအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဝင်မကြာခဏအလွဲသုံးစားမှုပုံစံများဖော်ထုတ်ရှောင်ရှားသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအန္တရာယ်အခြေအနေများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းအပြုအမူတွေကိုအားဖြည့်ကြောင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့အပြောင်းအလဲလုပ်နေဖြင့် abstinence အားပေးကြောင်း relapse preventionmodel အပေါ်အားကိုး။ ဆနျ့ကငျြ, obsessivecompulsive ရောဂါများအတွက်အောင်မြင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုထိတွေ့မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများ (2) ကိုအလေးပေး။
အဲဒီမှာလက်ရှိအမူအကျင့်စွဲလမ်း၏ကုသမှုများအတွက်အတည်ပြုခြင်းမရှိဆေးဝါးများဖြစ်ကြပေမယ့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ကုသဂတိတော်ကိုပြကြပြီအချို့သောဆေးဝါးများလည်းအမူအကျင့်စွဲလမ်း (75) ကုသဂတိတော်ကိုပြကြပြီ။ Naltrexone, အရက်နှင့် opioid မှီခို၏ကုသမှုများအတွက်အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုကအတည်ပြုတဲ့ mu-opioid အဲဒီ receptor ရန်, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် kleptomania ၏ကုသမှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ထားလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ (76-79) တွင်ထိရောက်မှုကိုပြသထားပါတယ်, နှင့်ပုန်ကန်တတ်သောအမျိုးအတွက်ကတိပေး compulsive ဝယ်၏လေ့လာမှုများ (80), compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (81), အင်တာနက်စွဲလမ်း (82) နှင့်ရောဂါဗေဒအသားအရေကောက်နေ (83) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်သူတို့ဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်အတွက်လုပ်ပေးအဖြစ် mu-opioid receptors ဖြစ်နိုင်သည် dopaminergic mesolimbic လမ်းကြောင်း၏မော်ဂျူမှတဆင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းအတွက်အလားတူအခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဆနျ့ကငျြ, ရေတို-သရုပ်ဆောင် mu-opioid အဲဒီ receptor ရန် naloxone obsessive-compulsive ရောဂါ (84) တွင်ရောဂါလက္ခဏာပိုမိုဆိုးရွားစေကြောင်း။
glutamatergic လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းဆေးလည်းအမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှစ်ဦးစလုံးကုသရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Topiramate, အရာလုပ်ကွက်တစ်ခု anticonvulsant (အခြားလုပ်ရပ်များအကြား) အချိုမှု receptor ၏ AMPA မျိုးကွဲ, 85 (အရက်လျှော့ချအတွက် Open-တံဆိပ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏လေ့လာမှုများ, compulsive ဝယ်, နှင့် (86) ကောက်နေ compulsive အသားအရေအတွက်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောအဖြစ်ထိရောက်မှုကိုပြသထားပါတယ် ), စီးကရက် (87), နှင့်ကိုကင်း (88) အသုံးပြုခြင်း။ N-acetyl cysteine ​​သည်နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular အချိုမှုအာရုံစူးစိုက်မှုပြုပြင်ထားတဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်, လျှော့ချလောင်းကစားဝိုင်းတိုကျတှနျးထားသနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ (89) ၏တဦးတည်းလေ့လာမှုအတွက်အမူအကျင့်များနှင့်ကင်းစွဲထဲမှာကိုကင်းတဏှာ (90) နှင့်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း (91) လျော့နည်းစေသည်။ ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုများနျူကလိယ accumbens အတွက် dopaminergic သေံ၏ glutamatergic မော်ဂျူအမူအကျင့်စွဲခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် (92) မှဘုံတစ်ယန္တရားဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
တစ် ဦး တည်းသာအမူအကျင့်စွဲ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစား, DSM-IV နှင့် ICD-10 အတွက်အသိအမှတ်ပြုရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ရောဂါရှာဖွေရေးစံသတ်မှတ်ချက်များသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု / မှီခိုမှုတို့နှင့်တူသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအပြုအမူကိုပိုမိုအာရုံစူးစိုက်စေခြင်း၊ အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းလာခြင်း၊ သည်းခံနိုင်ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးအကျိုးဆက်များ။ DSM-V Task Force မှရောဂါဗေဒလောင်းကစားကိုလက်ရှိစိတ်ဓာတ်ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမှမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာပြdisနာများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများအပါအ ၀ င်“ စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများ” ဟုခေါ်သောအမျိုးအစားအသစ်သို့ပြောင်းလဲရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ org, ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 10 ဝင်ရောက်) ။ အများအားဖြင့်သိသာထင်ရှားသည့်စံသတ်မှတ်ချက်အပြောင်းအလဲသည်လောင်းကစား ၀ င်ငွေအတွက်တရားမ ၀ င်လုပ်ရပ်များကျူးလွန်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ချက်ကျဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။
အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်း (Kouroush et al ကြည့်ပါ။ , ဤကိစ္စကို), အင်တာနက်စွဲ (93), compulsive ဝယ် (94) အပါအဝင်, ဗီဒီယို / ကွန်ပျူတာဂိမ်းစွဲလမ်း (95), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ (96) နှင့်အလွန်အကျွံ tanning အဖြေရှာတဲ့စံအဆိုပြုထားကြပါပြီ ။ ဤရွေ့ကားများသောအားဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခိုဘို့လက်ရှိ DSM-IV စံဥပမာအပေါ်အခြေခံပြီး, ထိုအပြုအမူအတွက်သုံးစွဲအလွန်အကျွံအချိန်, ခုတ်လှဲခြင်းသို့မဟုတ်အပြုအမူကိုရပ်တန့်ဖို့မအောင်မြင်ကြိုးစားမှု, ထိုအပြုအမူကိုကျော်လျော့နည်းသွားထိန်းချုပ်မှု, သည်းခံစိတ်, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆိုးရွားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထပ်ခါတလဲလဲနေကြတယ် အကျိုးဆက်များ။ အဆိုပါ DSM-V ကိုပစ္စည်း-Related Disorders အုပ်စုကိုအထူးအင်တာနက်စွဲ (; ဝင်ရောက်ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 10 www.dsm2010.org) ဖော်ပြ, DSM-V ကိုအတွက်ပါဝင်ဤ Non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းအတော်ကြာစဉ်းစားအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သို့သော်မမှန်များစွာသောအဘို့ဤရောဂါရှာဖွေစံများအတွက်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမကိုအတညျပွုဒေတာရှိပါတယ်, သူတို့လက်ရှိပြဿနာများ၏ပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းရန်စစ်တမ်းတူရိယာအဖြစ်အများဆုံးအသုံးဝင်ပါသည်။
စာပေမှာကြီးပြင်းတစ်ခုမှာအဖြေရှာတဲ့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအမူအကျင့်စွဲလမ်း (နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်း) တစ်ဦး Impulse-compulsive အတိုင်းအတာ (97) အပေါ်ကျကြဘူးသည်အဘယ်မှာရှိ, ဆိုလိုသည်မှာ, သူတို့ကပိုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်သို့မဟုတ် obsessive compulsive မမှန်တူသနည်း တချို့ကဒီပေါင်းတစ်စည်းတည်းရှုထောင်ချဉ်းကပ်အလွန်အမင်းရိုးရှင်းတဲ့ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြ, ထို Impulse နှင့် compulsive မဟုတ်ဘဲတစ်ခုတည်းအတိုင်းအတာ (98) ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ထမ်းဘိုးထက် orthogonal အတိုင်းအတာကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အဆုံးစွန်သောအငြင်းအခုံတွေနဲ့ကိုက်ညီထိုကဲ့သို့သော pharmacological ကုသမှု (48, 99) မှတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါတစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲ, အပြောင်းအလဲနှင့်အတူလူတို့တွင် Impulse ၏ဘွဲ့အတွက်သိသိသာသာအပြောင်းအလဲအဖြစ်တွေ့ရှိချက်ဖြစ်ကြသည်။
ဆက်စပ်သောပြissueနာတစ်ခုသည်ကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကြားတွင်ပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်သည်။ လူနာ ၂၁၀ ရှိလူ ဦး ရေ ၂၁၀ ၏လူ ဦး ရေနှင့်လက်တွေ့အချက်အလက်များကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှုအရအကျင့်စွဲစွဲလမ်းသောလူနာနှစ်ယောက်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၁၀၀) ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်လိင်စွဲလမ်းမှု (“ hypersexuality”) သည်အစောပိုင်းအသက်အရွယ်ရှိခြင်းနှင့်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိခြင်း အထီး, compulsive စျေးဝယ်နှင့်အတူလူနာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက။ ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုအတည်ပြုရန်နှင့်တိုးချဲ့ရန်နောက်ထပ်သုတေသနလိုအပ်သည်။ သိသိသာသာကွင်းဆင်းအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါသုတေသနတစ်ခုမှာချဉ်းကပ်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (သိမြင်မှု) နှင့်အပြုအမူအတွက် impulsivity နှင့် compulsivity ၏ discrete အစိတ်အပိုင်းများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အမျိုးမျိုးသောအပြုအမူနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ကြီးမားသော, သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော, ကောင်းစွာသွင်ပြင်လက္ခဏာတစ် ဦး ချင်းစီ၏ပြည့်စုံအကဲဖြတ်လိမ့်မယ် ( မော်တာ) domains များ, ဥပမာ, နှောင့်နှေး (ဆုလာဘ်၏ယာယီလျှော့ချ) ကိုထိခိုက်မခံ, အန္တရာယ် - ဆုလာဘ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ, အယူအဆရေးရာတင်းကျပ်, အချိန်မတန်မီမျှော်လင့်တုံ့ပြန်, သည်းခံစိတ်တုံ့ပြန်, တုံ့ပြန်မှုတားစီးနှင့်ပြောင်းပြန်သင်ယူမှု။
ကြီးထွားလာသည့်သက်သေအထောက်အထားများအရအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်သဘာဝသမိုင်းကြောင်း (များစွာသောဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များတွင်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းနှင့်ပျံ့နှံ့ခြင်း)၊ ထူးခြားသောတဏှာ၊ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၊ , comorbidity, ထပ်တူမျိုးဗီဇအလှူငွေ, neurobiological ယန္တရားများ (ဦး နှောက် glutamatergic, opioidergic, serotonergic နှင့် dopamine mesolimbic စနစ်များအတွက်အခန်းကဏ္ with နှင့်အတူ) နှင့်ကုသမှုတုံ့ပြန်မှု။ သို့သော်တည်ဆဲဒေတာသည်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းအတွက်အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်သည် (Wareham နှင့် Potenza၊ ဤပြseeနာကိုကြည့်ပါ)၊ မဖြစ်မနေဝယ်ယူရန်အတွက်ကန့်သတ်ထားသောအချက်အလက်များ (Lejoyeaux နှင့် Weinstein၊ ဤပြseeနာကိုကြည့်ပါ)၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု (Weinstein နှင့် Lejoyeaux၊ ဤပြissueနာကိုကြည့်ပါ) နှင့် ဗီဒီယို / ကွန်ပျူတာဂိမ်းစွဲမှု (Weinstein၊ ဤပြissueနာကိုကြည့်ပါ) နှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောအခြားအပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများ (Garcia and Thibaut၊ ဤပြseeနာကိုကြည့်ပါ)၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲခြင်း (Reynaud၊ ဤပြseeနာကိုကြည့်ပါ)၊ Odlaug နှင့် Grant, ဤပြissueနာ), ဒါမှမဟုတ်အလွန်အကျွံ tanning (Kouroush et al ။ , ဒီပြseeနာကိုကြည့်ပါ) ။
non-ပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲအဖြစ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းစဉ်းစားခိုင်လုံဖို့လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားရှိ၏ အဆိုပါ DSM-V ကို Task Force တစ်ခုစွဲနှင့်ဆက်စပ်ရောဂါများ (substancerelated နှင့် Non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးလွှမ်းခြုံအသစ်တစ်ခုအမျိုးအစား) တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါကနေ DSM-V ကို၎င်း၏ခွဲခြားရွေ့လျားအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ ပညာ၏လက်ရှိပြည်နယ်များတွင်အထူးသဖြင့်အတည်ပြုအဖြေရှာတဲ့စံများနှင့်အလားအလာ, longitudinal လေ့လာမှုမရှိခြင်းအတွက်ကြောင့်ထက်, ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းအဖြစ်အလားတူသူတို့အားလုံးကိုခွဲခြားအများကြီးလျော့နည်း full-စုံတဲ့လွတ်လပ်သောမမှန်ကဲ့သို့သောအခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုစဉ်းစားရန်နေဆဲအချိန်မတန်မီဖြစ်ပါသည် ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်အဖြစ်။ လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအပါအဝင်သိသိသာသာအနာဂတ်သုတေသန, (101), ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်း, အထူးသဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇ၏ domains များအတွက်, (ဦးနှောက်ပုံရိပ်အပါအဝင်) neurobiology နှင့်ကုသမှုများအတွက်ကြောင်း၏အဆင့်အမူအကျင့်စှဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာရောက်စေဖို့လိုအပ်ပါသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု (DAG) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, ofHealth အဆိုပါ Intramural သုတေသနအစီအစဉ်, အမျိုးသား Institutes ကထောက်ခံ; NIH (NIDA) R01 DA019139 (MNP) နှင့် RC1 DA028279 (JEG) ပေးအပ်; Disorders လောင်းကစားအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိဂိမ်းစင်တာနှင့်သုတေသနတို့အတွက်၎င်း၏အင်စတီကျုကထောက်ပံ့ထားတဲ့သုတေသနလောင်းကစားအတွက် Excellence နှင့်မင်နီဆိုတာနှင့်ယေးလ်စင်တာများ။ ဒေါက်တာ Weinstein Psychobiology အဘို့ဣသရေလအမျိုးအမျိုးသားအင်စတီကျုကထောက်ခံသည်။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ရဲ့ contents တစ်ခုတည်းကိုသာစာရေးသူ၏တာဝန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သေချာပေါက် Disorders သို့မဟုတ်အခြားရန်ပုံငွေအေဂျင်စီများမဆိုလောင်းကစားအပေါ်တာဝန်ရှိဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသားရေးစင်တာသို့မဟုတ်သုတေသနများအတွက်အင်စတီကျု၏တရားဝင်အမြင်များကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ။
အားလုံးစာရေးဆရာများဤဆောင်းပါး၏အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားမှုမရှိပဋိပက္ခသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Grant က Disorders လောင်းကစားအပေါ် NIMH, NIDA တာဝန်ယူမှုဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသားရေးစင်တာနှင့်သုတေသနတို့အတွက်ယင်း၏ဆက်နွယ် Institute မှသုတေသနထောက်ပံ့ငွေလက်ခံရရှိနှင့်သစ်တောဆေးဝါးသိရသည်။ ဒေါက်တာ Grant ကအယ်ဒီတာ-In-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်၏အဖြစ်သရုပ်ဆောင်များအတွက် Springer ထုတ်ဝေရေးထံမှနှစ်စဉ်လျော်ကြေး, NIH နှင့်အွန်လောင်းကစားအစည်းအရုံးများအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖျော်ဖြေထားပြီးအောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး, Inc ကနေအိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson လက်ခံရရှိခဲ့သည်အားလက်ခံတွေ့ဆုံ , က Norton စာနယ်ဇင်းနှင့် McGraw ဟေးလ်, Indiana ပြည်နယ် University Medical School ကျောင်းတွင်, တောင်ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်, Mayo ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်း, စွဲဆေးပညာ, အရီဇိုးနားပြည်နယ်, မက်ဆာချူးဆက်၏နိုင်ငံတော်, အော်ရီဂွန်ရဲ့ပြည်နယ်, အများ၏ကယ်လီဖိုးနီးယားလူ့အဖွဲ့အစည်းထဲကနေ honoraria လက်ခံရရှိခဲ့သည် Nova Scotia ၏ခရိုင်နှင့်အယ်လ်ဘာတာ၏ခရိုင်။ ဒေါက်တာ Grant ကထိန်းချုပ်မှုမမှန် impulse နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များတွင်ဥပဒရုံးတွေများအတွက်အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်လျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Potenza အောက်ပါဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအကူအညီအထောက်အပံ့များသို့မဟုတ်လျော်ကြေးလက်ခံရရှိခဲ့သည် for: အတိုင်ပင်ခံနှင့် Boehringer Ingelheim ဖို့အကြံပေး; Somaxon အတွက်ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွား; Disorders လောင်းကစားအပေါ်ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes, စစ်ပြန်ရေးရာဦးစီးဌာန, Mohegan Sun ကကာစီနိုတာဝန်ယူမှုဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသားရေးစင်တာနှင့်သုတေသနတို့အတွက်ယင်း၏ဆက်နွယ် Institute မှသုတေသနထောက်ခံမှုနှင့်သစ်တော Laboratories; မူးယစ်ဆေးစွဲ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်, ဒါမှမဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်စပ်သောစစ်တမ်းများ, မေးလ်သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းညှိနှိုင်းပါဝင်ခဲ့ပြီ စှဲသို့မဟုတ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များတွင်ဥပဒရုံးတွေအဘို့တိုင်ပင်တော်မူပြီ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲန်ဆောင်မှုများပြဿနာလောင်းကစားန်ဆောင်မှုများအစီအစဉ်၏ Connecticut ဦးစီးဌာနများတွင်လက်တွေ့စောင့်ရှောက်မှုပေးတော်မူပြီ နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကျမ်း၏ကြေညာသူအဘို့စာအုပ်တွေသို့မဟုတ်စာအုပ်အခန်းကြီးထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ Dr.Weinstein အစ္စရေးဆန့်ကျင်မူးယစ်ဆေးအာဏာပိုင်, Psychobiology အဘို့ဣသရေလအမျိုးအမျိုးသားအင်စတီကျု, ကနျြးမာရေး၏အစ္စရေးန်ကြီးဌာနများ၏ဦးစီးချုပ်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် Rashi Trust မှ (ပဲရစ်, ပြင်သစ်) နှင့်ထံမှမူးယစ်ဆေးစွဲအပေါ်ပို့ချချက်များအတွက်ဝန်ဆောင်ခအနေဖြင့်သုတေသနထောက်ပံ့ငွေလက်ခံရရှိခဲ့သည် ပညာရေးအစ္စရေးန်ကြီးဌာန။ ဒေါက်တာ Gorelick မျှပြင်ပတွင်ရန်ပုံငွေသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
1. Potenza MN ။ မမှန်သည် non-ပစ္စည်းဥစ္စာ-related အခြေအနေများပါဝင်သည် addictive သငျ့သလော စွဲ 2006; 101: 142-151 ။ 2. Potenza MN, ကိုရမ်ကျမ်း LM, Pallanti အက်စ် impulsecontrol မမှန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါအကြားဆက်ဆံရေး: တစ်ဦးကလက်ရှိနားလည်မှုနှင့်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွန်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 2009; 170: 22-31 ။ 3. Holden C. အမူအကျင့်စှဲအဆိုပြုထား DSM-V ကိုအတွက်ပွဲဦးထွက်။ သိပ္ပံ 2010; 327: 935 ။ 4. American Psychiatric Association ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ။ 4th ed ။ , စာသားတည်းဖြတ်မူ (DSM-IV-TR) ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး, Inc, 2000 ။ 5. ကုန်သည်များ RA, Potenza MN ။ Neurodevelopment, Impulse နှင့်ဆယ်ကျော်သက်လောင်းကစားဝိုင်း။ J ကို Gamble လုံး 2003; 19: 53-84 ။ 6. SlutskeWS ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်သဘာဝပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ကုသမှု-ရှာကြံ: နှစ်ခုကိုအမေရိကန်၏ရလဒ်များ အမျိုးသားရေးစစ်တမ်းများ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 2006; 163: 297-302 ။ 7. ဘရူဂျာ Potenza MN ။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်ခြင်း၏ neurobiology နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ: မူးယစ်ဆေးစွဲလမ်းမှဆက်ဆံရေး။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Pharmacol 2008; 75: 63-75 ။ 8. ကက်စထရို V ကို, Fong သည် T-, Rosenthal RJ, Tavares အိပ်ချ်က de ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေနှင့်အရက်သမားအကြားတဏှာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ 2007; 32: 1555-1564 ။ 9. Blanco, C, Moreyra P ကို, Nunes EV, S'aiz-Ruiz J ကို, Ib'a~nez အေ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း: စွဲလှူ? seminal Clin Neuropsychiatry 2001; 6: 167-176 ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုမှုများအတွက် 06 / 21 / 10 အပေါ် Digestive ရောဂါများအားဖြင့် informahealthcare.com ကနေဒေါင်းလုတ် am J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှုဌာနခွဲသာ။ အပြုအမူစွဲ710 ။ je, ဘရူဂျာ Potenza MN ပေးသနား။ ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏ neurobiology ။ CNS Spectr 2006; 11: 924-930 ။ 11 ။ je, Potenza MN ပေးသနား။ kleptomania များအတွက်ကုသမှုရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကျား-related ကွဲပြားခြားနားမှု။ CNS Spectr 2008; 13: 235-245 ။ 12 ။ je ကင်မ် SW ပေးသနား။ 131 အရွယ်ရောက်ပြီးသူရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ၏လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်လက်တွေ့ features တွေ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 2001; 62: 957-962 ။ 13 ။ Potenza MN, Steinberg MA, McLaughlin SD, Wu R, Rounsaville BJ, O'Malley SS ။ တစ်ဦးလောင်းကစားဝိုင်းတိုင်ကြားမှုသုံးပြီးပြဿနာကိုလောင်းကစားသမားတွေ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်ကျား-related ကွဲပြားခြားနားမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 2001; 158: 1500-1505 ။ 14 ။ Brady KT, Randall CL ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်အတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်အမေရိက Am 1999; 22: 241-252 ။ 15 ။ Ledgerwood DM, Weinstock J ကို, Morasco BJ, Petri မိုင်။ လက်တွေ့ features နဲ့မကြာသေးခင်ကလောင်းကစားဝိုင်း-related တရားမဝင်အပြုအမူနှင့်မရှိဘဲရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ၏ကုသမှုဟောကိန်း။ J ကို Am Acad စိတ်ရောဂါကုသမှုဥပဒေ 2007; 35: 294-301 ။ 16 ။ Lejoyeux M က, Tassain V ကိုရှောလမုန် J ကို, Ad`es ဂျေ စိတ်ဓာတ်လူနာ compulsive ဝယ်၏လေ့လာမှု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 1997; 58: 169-173 ။ 17 ။ Kim က SW, Grant က je ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှုထောင်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 2001; 104: 205-212 ။ 18 ။ je ကင်မ် SW ပေးသနား။ kleptomania အတွက်စိတ်ထားနှင့်အစောပိုင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှု။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု 2002; 43: 223-228 ။ 19 ။ ရေမွန် NC, Coleman, E, Miner MH ။ စိတ်ရောဂါ comorbidity နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် compulsive / ထကြွလွယ်သောစရိုက်များ။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု 2003; 44: 370-380 ။ 20 ။ ကယ်လီ TH, Robbins, G, မာတင်, CA, Fillmore MT, ယာဉ်ကြော SD, Harrington Ng, Rush CR ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအားနည်းချက်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: D-ဖက်တမင်းဆေးပြားနှင့်အာရုံခံစားမှု-ရှာကြံအခြေအနေ။ Psychopharmacology (Berl) 2006; 189: 17-25 ။ 21 ။ Tavares H ကို, တပါးအမျိုးသားတို့သည် V. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါ: ပြုမူမှုပုံမမှန်တစ်ရောင်စဉ်ဆီသို့။ ဗြာဇီယာ Psiquiatr 2007; 29: 107-117 ။ 22 ။ Blanco, C, Potenza MN, Kim က SW, Ib'a~nez တစ်ဦးက, Zaninelli R ကို, Saiz-Ruiz J ကို, Grant က je ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် Impulse နှင့် compulsive ၏တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးလေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 2009; 167: 161-168 ။ 23 ။ ချိန်ဘာလိန် SR, Fineberg NA, ဘလက်ဝဲလ်အေဒီ, Robbins TW, Sahakian BJ ။ မော်တော်တားစီးနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါနှင့် trichotillomania အတွက်သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 2006; 163: 1282-1284 ။ 24 ။ Odlaug BL, Grant က je, Chamberlain SR ။ မော်တော်တားစီးနှင့်ရောဂါဗေဒအသားအရေ Pick အတွက်သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ prog Neuropharm Biol psyche 2010; 34: 208-211 .. 25 ။ Cunningham-Williams က RM, Cottler LB, Compton WM 3rd, Spitznagel EL ။ စိန့်ကနေပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးချို့ယွင်း-ရလဒ်များ: အခွင့်အလမ်းတွေကိုယူပြီး လူးဝစ် epidemiological ရေဝေရေလဲဧရိယာလေ့လာပါ။ နံနက် J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေး 1998; 88: 1093-1096 ။ 26 ။ Petri မိုင်, Stinson FS, Grant က BF ။ DSM-IV ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန်၏ Comorbidity: အရက်နှင့်ဆက်စပ်အခြေအနေများအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် epidemiological စစ်တမ်းကနေရလဒ်တွေကို။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 2005; 66: 564-574 ။ 27 ။ Bland RC, Newman က SC, Orn H ကို, Stebelsky G. အ Edmonton အတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏ကူးစက်ရောဂါ။ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1993 နိုင်သလား; 38: 108-112 ။ 28 ။ El-Guebaly N ကို, Patten SB, ဟင်းက S, Williams ကဖက်စပ်, Beck, CA, Maxwell CJ, ဝမ် JL ။ လောင်းကစားအပြုအမူ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာသုံးစွဲခြင်းနှင့်စိတ်နှင့်စိုးရိမ်စိတ်ရောဂါများအကြားကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများ။ J ကို Gamble လုံး 2006; 22: 275-287 ။ 29 ။ Welte JW, Barnes GM က, Tidwell MC, ဟော့ဖ်မန်း JH ။ အမေရိကန်အကြားပြဿနာလောင်းကစားများ၏ပျံ့နှံ့ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများ: တစ်အမျိုးသားရေးစစ်တမ်းကနေရလာဒ်။ J ကို Gamble လုံး 2008; 24: 119-133 ။ 30 ။ ယန်း JY, Ko CH, ယန်း CF, Chen က CS, Chen က CC ကို။ ကောလိပ်ကျောင်းသားတို့တွင်အအန္တရာယ်ရှိသောအရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းအကြားအသင်းအဖွဲ့: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏နှိုင်းယှဉ်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Clin neuroscience 2009; 63: 218-224 ။ 31 ။ Stinchfield R ကို, KushnerMG, Winters KC ။ အရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြဿနာပြင်းထန်မှုနှင့်လောင်းကစားကုသမှုရလဒ်ကိုလောင်းကစားနှင့် ပတ်သက်. ကြိုတင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကုသမှု။ J ကို Gamble လုံး 2005; 21: 273-297 ။ 32 ။ Duhig လေး, Maciejewski PK, Desai က RA, Krishnan-Sarin S က, Potenza MN ။ အရက်သောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ဆယ်ကျော်သက်အတိတ်နှစ်လောင်းကစားသမားတွေနှင့် Non-လောင်းကစားသမားတွေ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ 2007; 32: 80-89 ။ 33 ။ je, Potenza MN ပေးသနား။ ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း။ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 2005; 17: 237-241 ။ 34 ။ Potenza MN, Steinberg MA, McLaughlin SD, Wu R, Rounsaville BJ, Krishnan-Sarin S, George TP, O'Malley SS ။ တစ်ဦးလောင်းကစားဝိုင်းတိုင်ကြားမှုတောင်းဆိုပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေ tobaccosmoking ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ နံနက် J ကိုစွဲ 2004; 13: 471-493 ။ 35 ။ Presta S, Marazziti D, Dell'Osso L, Pfanner C, Pallanti S, Cassano GB ။ Kleptomania: အီတလီနမူနာများတွင်လက်တွေ့ features နဲ့ comorbidity ။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု 2002; 43: 7-12 ။ 36 ။ di Nicola M က, Tedeschi: D, Mazza M က, Martinotti, G, Harnic: D, Catalano V ကို, Bruschi တစ်ဦးက, Pozzi, G, Bria P ကို, Janiri L. စိတ်ကြွရောဂါလူနာအတွက်အမူအကျင့်စှဲ: Impulse နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတိုင်းအတာ၏အခန်းက္ပ။ J ကို disorders 2010 အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု; [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ် Doi ၏: 10.1016 / j.jad.2009.12.016] ။ 37 ။ Petri မိုင်, Casarella တီ လောင်းကစားဝိုင်းပြဿနာများကိုနှင့်အတူပစ္စည်းဥစ္စာချိုးဖောက်နှောင့်နှေးဆုလာဘ်များအလွန်အကျွံလျှော့စျေး။ မူးယစ်ဆေးအရက် 1999 ပြုမှ, 56: 25-32 ။ 38 ။ Bechara အေ အန္တရာယ်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်း: စိတ်လှုပ်ရှားမှု, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်စွဲလမ်း။ J ကို Gamble လုံး 2003; 19: 23-51 ။ 39 ။ Cavedini P, Riboldi, G, Keller R ကို, D'Annucci တစ် ဦး, Bellodi L. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းလူနာတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2002; 51: 334-341 ။ 40 ။ ko CH, Hsiao S ကိုလျူ GC, ယန်း Ju, ယန် MJ, ယန်း CF. ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, အန္တရာယ်များကိုယူအလားအလာများနှင့်အင်တာနက်ကိုစွဲနှင့်အတူကောလိပ်ကျောင်းသား၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 2010; 175: 121-125 ။ 41 ။ Goudriaan AE, Oosterlaan J ကို, က de Beurs အီး, ဗန် Den ချောက်ကမ်းပါးဒဗလျူ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် Neurocognitive လုပ်ဆောင်ချက်များကို: အရက်မှီခို, Tourette syndrome ရောဂါနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်။ စွဲ 2006; 101: 534-547 ။ 42 ။ Potenza MN ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်း၏ neurobiology: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်အသစ်တွေ့ရှိချက်များ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ 2008; 363: 3181-3189 ။ 43 ။ Fineberg NA, Potenza MN, Chamberlain SR, ဘာလင် HA, Menzies L ကို, BecharaA, Sahakian BJ, Robbins TW, Bullmore ET, Holland အီး တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည် endophenotypes ရန်, compulsive နှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူတွေကိုစကားတွေ: တစ်ဦးကဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်။ Neuropsychopharmacology 2010; 35: 591-604 ။ 44 ။ Blanco, C, Orensanz-Mu~noz L ကို, Blanco-Jerez ကို C, Saiz-Ruiz ဂျေ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် platelet Mao လှုပ်ရှားမှု: တစ် psychobiological လေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1996; 153: 119-121 ။ 45 ။ Holland, E, Kwon J ကို, Weiller က F, Cohen ကို L ကို, Stein DJ သမား, DeCaria ကို C, Liebowitz M ကရှိမောငျဃ လူမှုရေး phobia အတွက် Serotonergic function ကို: ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 1998; 79: 213-217 ။ 46 ။ Dagher တစ်ဦးက, Robbins TW ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စွဲ, dopamine: ပါကင်ဆန်ရောဂါမှထိုးထွင်းသိမြင်မှု။ အာရုံခံဆဲလျ 2009; 61: 502-510 ။ 47 ။ O'Sullivan SS, Evans AH, Lees AJ.Dopamine dysregulation syndrome - ကူးစက်ရောဂါ၊ ယန္တရားနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ CNS မူးယစ်ဆေးဝါး 2009; 23: 157-170 ။ 48 ။ Zack M က, Poulos CX ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် psychostimulant စွဲအတွက် dopamine များအတွက်စင်ပြိုင်အခန်းကဏ္ဍ။ Curr မူးယစ်ဆေးဗြာ 2009 အလွဲသုံးစားပြုမှု; 2: 11-25 ။ 49 ။ Potenza MN, Leung HC, Blumberg HP က, Peterson BS, Fulbright RK, Lacadie CM, Skudlarski P ကို, ဂိုး JC ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက် ventromedial prefrontal cortical function ကိုတစ်ဦး FMRI Stroop တာဝန်လေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 2003; 160: 1990-1994 ။ 50 ။ လန်ဒန် ED, Ernst M က, Grant က S နဲ့, Bonson K ကို Weinstein အေ Orbitofrontal cortex နှင့်လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု: အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်။ Cereb Cortex 2000; 10: 334-342 ။ 51 ။ ko CH, လျူ GC, Hsiao S က, ယန်း JY ယန် MJ, လင်း WC, ယန်း CF, Chen က CS ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်း၏ဂိမ်းကစားတတ်ပြီးသူနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res 2009; 43: 739-747 ။ 52 ။ Reuter J ကို, Raedler T က, နှင်းဆီ M က, လက်, ငါGl¨ascher J ကို, B¨uchel C. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏လျှော့ချ activation ဆက်စပ်နေပါတယ်။ နတ် neuroscience 2005; 8: 147-148 ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုမှုများအတွက် 06 / 21 / 10 အပေါ် Digestive ရောဂါများအားဖြင့် informahealthcare.com ကနေဒေါင်းလုတ် am J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှုဌာနခွဲသာ။ 8 ဂျေ E. Grant et al ။ 53 ။ Wrase J ကို, Schlagenhauf က F, Kienast T က, W¨ustenberg T က, Bermpohl က F, Kahnt T က, Beck တစ်ဦးက, Str¨ohleတစ်ဦးက, Juckel, G, Knutson B, Heinz အေ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု detoxified အရက်သမားအတွက်အရက်တဏှာနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Neuroimage 2007; 35: 787-794 ။ 54 ။ SteevesTD, Miyasaki J ကို, Zurowski M က, Lang AE, Pellecchia, G, VanEimeren T က, Rusjan P ကို, Houle S က, Strafella AP ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူ Parkinsonian လူနာတိုးပွားလာ striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်: တစ်ဦးက [11C] raclopride ပေလေ့လာမှု။ ဦးနှောက် 2009; 132: 1376-1385 ။ 55 ။ Bradberry CW ။ သဘောတူညီချက်ဒေသများ, သဘောထားကွဲလွဲခြင်း, စွဲလမ်းများအတွက်ဂယက်: ကြွက်, မျောက်နှင့်လူသားတွေအတွက် cue သက်ရောက်မှုများကိုကင်းထိခိုက်စေ dopamine ဖျန်ဖြေခြင်း။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 191: 705-717 ။ 56 ။ Weintraub: D, Potenza MN ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိ Impulse Control Disorders Curr Neurol neuroscience ကိုယ်စားလှယ် 2006; 6: 302-306 ။ 57 ။ Voon V ကို, Fernagut စာတိုက်, Wickens J ကို, Baunez ကို C, Rodriguez က M, အဲဒီ့ N ကို, Juncos JL, Obeso ဂျာ Bezard အီး ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်နာတာရှည် dopaminergic stimulaton: dyskinesias မှ impulse control disorders ။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet Neurol 2009; 8: 1140-1149 ။ 58 ။ Voon V ကို, ခေါင်းဆောင် Hassan K ကို Zurowski M က, က de Souza က M, Thomsen T က, Fox က S နဲ့, Lang AE, Miyasaki ဂျေ ပါကင်ရောဂါအတွက်ထပ်တလဲလဲနှင့်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူတွေ၏ပျံ့နှံ့။ အာရုံကြော 2006; 67: 1254-1257 ။ 59 ။ Weintraub: D, Siderowf အေဒီ, Potenza MN, Goveas J ကို, Morales KH, Duda je, Moberg PJ, Stern ပာကို MB ။ ပါကင်ရောဂါအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားထိန်းချုပ်မမှန်နှင့်အတူ dopamine agonist အသုံးပြုမှုအသင်းမှ။ Arch Neurol 2006; 63: 969-973 ။ 60 ။ Zack M က, Poulos CX ။ တစ်ဦးက D2 ရန်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲ၏အကြိုးနှင့် priming သက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ Neuropsychopharmacology 2007; 32: 1678-1686 ။ 61 ။ Fong သည် T-, Kalechstein တစ်ဦးက, Bernhard B, Rosenthal R ကို, Rugle L. ဗီဒီယိုကဖဲချပ်ဝေရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ၏ကုသမှုများအတွက် olanzapine တစ် doubleblind, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 2008; 89: 298-303 ။ 62 ။ McElroy SL, နယ်လ်ဆင် eb, Welge ဂျာ ​​Kaehler L ကို, Keck PE ဂျူနီယာ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှု Olanzapine: တစ်ဦးကအနုတ်လက္ခဏာကျပန်း placebocontrolled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 2008; 69: 433-440 ။ 63 ။ Black က DW, Monahan စာတိုက်, Temkit M က, Shaw ကအမ် ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းတစ်မိသားစုလေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 2006; 141: 295-303 ။ 64 ။ je ပေးသနား။ မိသားစုသမိုင်းနှင့် kleptomania နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်စိတ်ရောဂါ comorbidity ။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု 2003; 44: 437-441 ။ 65 ။ Black က DW, Repertinger S က, Gaffney ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Gabel ဂျေ မိသားစုသမိုင်းနှင့် compulsive ဝယ်တွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်စိတ်ရောဂါ comorbidity: ပဏာမတွေ့ရှိချက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1998; 155: 960-963 ။ 66 ။ Slutske WS, Eisen S က, စစ်မှန်သော WR, လီယွန် MJ, Goldberg က J ကို, Tsuang အမ် အမျိုးသားများတွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အရက်မှီခိုဘို့ဘုံမျိုးရိုးဗီဇအားနည်းချက်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 2000; 57: 666-673 ။ 67 ။ Tsuang MT, လီယွန် MJ, Meyer JM, ဒို T က, Eisen လုပ် SA, Goldberg က J ကို, စစ်မှန်သော W က, လင်း N ကို, Toomey R ကို, Eaves L. အမျိုးသားများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အလွဲသုံးစားမှု co-ဖြစ်ပျက်မှု: မူးယစ်ဆေး-တိကျတဲ့နှင့် shared အားနည်းချက်များ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1998; 55: 967-972 ။ 68 ။ လာ DE ။ အဆိုပါ DRD2 ဗီဇ၏လေ့လာမှုများထံမှသင်ခန်းစာများ: အဘယ်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို polygenic အမွေဥစ္စာဘို့လိုအပ်သည်။ အရက် 1998; 16: 61-70 ။ 69 ။ Hamidovic တစ်ဦးက, Dlugos တစ်ဦးက, Skol တစ်ဦးက, Palmer က AA ကို, က de ကျေးအိပ်ချ် ကျန်းမာသင်တန်းသားများအတွက် D-စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူတစ်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု: အပြုအမူတားစီးနှင့် Impulse / အာရုံခံစားမှုရှာ ဆက်စပ်. အတွက် dopamine အဲဒီ receptor D2 အတွက်မျိုးဗီဇပြောင်းလဲနိုင်သည်၏အကဲဖြတ်။ Exp Clin Psychopharmacol 2009; 17: 374-383 ။ 70 ။ Lee က Y ကို, ဟန်: D, ယန် K သည်ဒံယေလက M, Na ကို C, Kee B, Renshaw P. အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုသူအတွက် 5HTTLPR polymorphic နှင့်စိတ်ထား၏ဝိသေသလက္ခဏာများ Depressionlike ။ အကျိုးသက်ရောက်စေ Disorders 2009 ၏ဂျာနယ်; 109: 165-169 ။ 71 ။ Petri မိုင်, Ammerman Y ကို, Bohl J ကို, Doersch တစ်ဦးက, ဂေး H ကို, Kadden R ကို, Molina ကို C, Steinberg K. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေများအတွက်သိမှု-အပြုအမူကုထုံး။ J ကို Clin Psychol 2006 Consult; 74: 555-567 ။ 72 ။ Teng EJ, WoodsDW, TwohigMP ။ တစ်ဦးရှေ့ပြေးစုံစမ်းစစ်ဆေး: နာတာရှည်အရေပြား Pick များအတွက်ကုသမှုအဖြစ်အလေ့အထမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်။ ပြုမူနေပြုပြင်မွမ်းမံ 2006; 30: 411-422 ။ 73 ။ Mitchell က je, Burgard M က, တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး R ကို, Crosby သည် RD, က de Zwaan အမ် compulsive ဝယ်ရောဂါအတှကျသိမှုအမူအကျင့်ကုထုံး။ ပြုမူနေ Res Ther 2006; 44: 1859-1865 ။ 74 ။ Toneatto T က, Dragonetti R. ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက်လူထုအခြေပြုကုသမှုထိရောက်မှု: cognitivebehavioral vs. ၏တစ်ဦးကအမည်ခံစမ်းသပ်အကဲဖြတ် တကျိပ်နှစ်ပါးသော-Step ကုထုံး။ နံနက် J ကိုစွဲ 2008; 17: 298-303 ။ 75 ။ Dannon PN, Lowengrub K ကို Musin အီး, Gonopolsky Y ကို, Kotler အမ် ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက်မူးယစ်ဆေးကုသမှု 12 လနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှု: တစ်ဦးကမူလတန်းရလဒ်ကိုလေ့လာမှု။ J ကို Clin Psychopharmacol 2007; 27: 620-624 ။ 76 ။ Kim က SW, Grant က je, Adson DE, ရှင် YC ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှုကို Double-မျက်စိကန်း naltrexone နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2001; 49: 914-921 ။ 77 ။ je, Potenza MN, Holland, E, Cunningham-Williams က R ကို, Nurminen T က, Smits, G, Kallio အေပေးသနား ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှုထဲမှာ opioid ရန် nalmefene ၏ပေါင်းစုံပါစုံစမ်းစစ်ဆေး။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 2006; 163: 303-312 ။ 78 ။ je ကင်မ် SW, Hartman ကယ်ပေးသနား။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှုထဲမှာ opiate ရန် naltrexone ၏တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှုအားတိုက်တွန်းလိုက်သည်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 2008; 69: 783-789 ။ 79 ။ je ကင်မ် SW, Odlaug BL ပေးသနား။ kleptomania ၏ကုသမှုထဲမှာ opioid ရန်, naltrexone ၏တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2009; 65: 600-606 ။ 80 ။ je ပေးသနား။ naltrexone နဲ့ကုသ compulsive ဝယ်သုံးအမှုပေါင်း။ int J ကိုစိတ်ရောဂါ Clin အလေ့အကျင့် 2003; 7: 223-225 ။ 81 ။ ရေမွန် NC, Grant က je ကင်မ် SW, Coleman အီး naltrexone နှင့် serotonin reuptake inhibitors နှင့်အတူ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ကုသမှု: နှစ်ဦးဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်။ int Clin Psychopharmacol 2002; 17: 201-205 ။ 82 ။ Bostwick JM, Bucci ဂျေအေ။ naltrexone နဲ့ကုသအင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်း။ Mayo အဘိဓါန် Clin proc 2008; 83: 226-230 ။ 83 ။ အာနိုး LM, Auchenbach ကို MB, McElroy SL ။ Psychogenic excoriation ။ လက်တွေ့ features တွေ, အဆိုပြုအဖြေရှာတဲ့စံ, ရောဂါနှင့်ကုသမှုမှချဉ်းကပ်။ CNS မူးယစ်ဆေးဝါး 2001; 15: 351-359 ။ 84 ။ Insel TR, Pickar ဃ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက် Naloxone အုပ်ချုပ်ရေး: နှစ်ခုဖြစ်ပွားအစီရင်ခံစာ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1983; 140: 1219-1220 ။ 85 ။ Roncero ကို C, Rodriguez-Urrutia တစ်ဦးက, Grau-လိုပက်ဇ်, L, CASA အမ် အဆိုပါ Impulses သတင်းပို့မမှန်များ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက် Antiepilectic မူးယစ်ဆေးဝါးများ။ Actas ESP Psiquiatr 2009; 37: 205-212 ။ 86 ။ ဂျွန်ဆင် BA, Rosenthal N၊ Capece JA, Wiegand F, Mao L, Beyers K, McKay A, Ait-Daoud N, Anton RF, Ciraulo DA, Kranzler HR, Mann K, O'Malley SS, Swift RM ။ တစ်ဦး randomized ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး: အရက်မှီခိုကုသမှုအတွက် Topiramate ။ ဂျေအေအမ်အေ 2007; 298: 1641-1651 ။ 87 ။ Johnson က BA, ဆွစ်ဖ် RM, Addolorato, G, Ciraulo DA, Myrick အိပ်ချ် အရက်ကုသမှုအတွက် GABAergic ဆေးဝါးများအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ထိရောက်မှု။ အရက် Clin Exp Res 2005; 29: 248-254 ။ 88 ။ Kampman KM, Pettinati H, Lynch KG, Dackis C, Sparkman T, Weigley C, O'Brien, CP ။ ကိုကင်းမှီခို၏ကုသမှုများအတွက် topiramate ၏တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးရုံးတင်စစ်ဆေး။ မူးယစ်ဆေးအရက် 2004 ပြုမှ, 75: 233-240 ။ 89 ။ je ကင်မ် SW, OdlaugBL ပေးသနား။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှု N-acetyl cysteine ​​တစ်ဦးအချိုမှု-ပြောင်းလဲပစ်အေးဂျင့်: တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးလေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2007; 62: 652-657 ။ 90 ။ LaRowe SD, Myrick H ကို, Hedden S က, Mardikian P ကို, Saladin က M, McRae တစ်ဦးက, Brady K ကို Kalivas PW, Malcolm R. Nacetylcysteine ​​လျှော့ချကိုကင်းအလိုဆန္ဒရှိပါသလား? နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 2007; 164: 1115-1117 ။ 91 ။ Mardikian PN, LaRowe SD, Hedden S က, Kalivas PW, Malcolm RJ ။ ကိုကင်းမှီခို၏ကုသမှုများအတွက် N-acetylcysteine ​​၏ open-တံဆိပ်ရုံးတင်စစ်ဆေး: တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးလေ့လာမှု။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2007; 31: 389-394 ။ 92 ။ Kalivas PW, Hu XT ။ psychostimulant စွဲအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တားစီး။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 2006; 29: 610-616 ။ 93 ။ Black က DW ။ compulsive ဝယ်: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 1996; 57: 50-54 ။ 94 ။ ko CH, ယန်း JY, ချန် SH ယန် MJ, လင်း HC, ယန်း CF. ရောဂါရှာဖွေစံနှင့်စိစစ်အဆိုပြုထားနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများကိုအင်တာနက်စွဲလမ်း၏ tool ကိုဖော်ထုတ်။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု 2009; 50: 378-384 ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုမှုများအတွက် 06 / 21 / 10 အပေါ် Digestive ရောဂါများအားဖြင့် informahealthcare.com ကနေဒေါင်းလုတ် am J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှုဌာနခွဲသာ။ အပြုအမူစွဲ995 ။ အထမ်းသမား, G, Starcevic V ကို, Berle: D, Fenech P. ပြဿနာဗီဒီယိုဂိမ်းအသုံးပြုမှုကိုအသိအမှတျပွု။ Aust NZJ စိတ်ရောဂါကုသမှု 2010; 44: 120-128 ။ 96 ။ Goodman အေ လိင်စွဲ: ဒီဇိုင်းနှင့်ဆက်ဆံမှု။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther 1992; 18: 303-314 ။ 97 ။ Holland, E, Wong က CM ။ ခန္ဓာကိုယ် dysmorphic ရောဂါ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 1995; 56: 7-12 ။ 98 ။ Lochner ကို C, Stein DJ သမား။ obsessivecompulsive spectrum ကိုမမှန်ပေါ်တွင်အလုပ် obsessivecompulsive ရောဂါများ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အထောက်အကူပြုပါသလား? prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2006; 30: 353-361 ။ 99 ။ je ပေးသနား။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ဆုလာဘ်တားစီးဘို့ဝတ္ထု pharmacological ပစ်မှတ်။ Neuropsychopharmacology ၏အမေရိကန်ကောလိပ်, 48th နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး, ဟောလိဝုဒ်, FL, 2009 မှာရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ Translational လေ့လာရေးအပေါ်စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာပေးအပ်သည်။ 100 ။ LochnerC, Hemmings သည် SM, Kinnear CJ, NiehausDJ, နဲလ် DG, CorfieldVA, Moolman-Smook JC, Seedat S က, Stein DJ သမား။ လက်တွေ့နှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆက်စပ်မှု: obsessivecompulsive ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် obsessivecompulsive spectrum ကိုမမှန်၏စပျစ်သီးပြွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု 2005; 46: 14-19 ။ 101 ။ Potenza MN ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, လောင်းကစားများနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၏အရေးပါမှု: စွဲအတွက် Translational သုတေသနအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Neuropsychopharmacology 2009; 34: 2623-2624 ။ 102 ။ je ပေးသနား။ Impulse Control Disorders: အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုနားလည်ရန်နှင့်ကုသရန်အတွက်ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ၏လမ်းညွှန်။ နယူးယောက်, NY: က Norton စာနယ်ဇင်း, 2008 ။